Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda? – Kiribto Somali Media
Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda?
mowduucan waa mowduuc Aad uqoto dheer una bahan marka hore in aan faham ka helno qaabka lacagaha kiribto iyo dhamaan matalayasha gudaha kiribto ka jira ushaqeeyan si aan u helno qaabkii aan u kala sari lahayn kuwa xalashaa iyo kuwa xaaranta ah ama ku ogaan Kari lahayn kuwa tuhunka uu ku jiro.
Baaritaano muda dheer socday kadib waxaan halkan idin kula wadaagaynaa muqaalo sharaxaad ka bixinaya sidii aan mowduucan u fahmi lahayn inagoo ka bilaabayna marka hore in aan helno faham ah sida lacagta kiribto iyo matalayasheeda loo kala saaro. Kadibne waxan faham ka qadaneynaa lacagta.iyo sida xaalkeedu yahay iyo kala saarida inta xalaasha ah iyo inta xaraanta ah. ee baaritanku tilmaamayo. iyo sababahooda muqaladan taxanaha ah ayaad kaga bogan kartaan.
waxaa nala socod siinaya cabdifataax caano
Muqaalkan labaad waxan ku baraneynaa kala duwanansha lacagaha kiribto gaar ahan coins ama shillin iyo tokens. Ama matalayaal iyo qaybaha ay ukala baxaan taas oo noo fududeyneysa in aan faham ka helno halka aan dooneyno in aan si fiican u helno miraha muqaalka.
Muqaalkan sedexaad waxan ku barandoon maxaa lagu saleyn karaa xukunka lacagaha kiribtada maxayse culimadu ka eegayaan si loo helo asalka xukunka ay qaadan kareyso kiribtadaas iyo mashruucyada ay fulineyso
sideene shaqsiyan aad u heli kartaa goobaha baaritaanaada laga sameyn karo si loo helo xogaha dhabta ah ee aad u baahan tahay
Muqaalkan afaraad waxan ku fahmi dooonaa waa maxay Defi. Ama dhaqaalaha xorta ah.
Sidee bay u shaqeeysaa maxaase la isku dhax dhaaf sadaa iyo maxaa loo aas aasay asal ahan goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah ee la isku dhax dhaafsado.
taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhaca iyo faham dhab ah, oon xukunka aan ka qaadan karno.
Muqaalkan shanaad waxan ku fahmi dooonaa waa maxay Defi. Ama dhaqaalaha xorta ah.
Sidee bay u shaqeeysaa maxaase la isku dhax dhaafsadaa iyo maxaa loo aas aasay asal ahan goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah ee la isku dhax dhaafsado
taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhaca iyo fahamka dhab ah, een xukunka aan ka qaadan karno.
Muqaalkan lixaad waxan ku fahmi dooonaa waa maxay lending iyo borrowing. Ama dayn bixin iyo dayn qaadasho
Sidee bay u shaqeeyaan maxaase la isku dhax dhaafsadaa maxaa loo aas aasay asal ahan iyo goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhaca iyo fahamka dhabta ah een xukunka aan ku qaadan karno..
mowduucan waa mowduuc Aad uqoto dheer gudaha suuqa defi’ygana ka ah udub dhaxaadka ugu wayn ee uu ku tagan yahay isla markaana ah Meesha kaliya ee maanta hantida suuqan qaybtisan ugu badan la isku dhax dhaaf sado muqalkan waxan idin kugu soo ban dhigeynaa qaabka loo baaro lona ogaado matalayasha howshaas qabta ee qof walba oo muslim ah in uu ka fogaado ay tahay.
Muqaalkan todobaad waxan ku fahmi dooonaa waa maxay staking’ka ama in kiribto aad meel ku xirto.
Staking’ku imisuu ukala baxaa Sidee bay u shaqeeyaan maxaase la isku dhax dhaafsadaa maxaa loo aas aasay asal ahan iyo goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhaca iyo fahamka dhabta ah een xukunka aan ku qaadan karno.
mowduucan waa mowduuc Aad uqoto dheer gudaha suuqa defi’ygana ka ah udub dhaxaadka ugu wayn ee u uku taganyahay isla markaana ah Meesha labaad ee manta hantida suuqan qaybtisan ugu badan la isku dhax dhaaf sado muqalkan waxan idin kugu soo ban dhigeynaa qaabka loo baro lona ogaado matalayasha howshaas qabta ee qof walba oo muslim ah in uu ka fogaado ay tahay ama ku ogaan Kari lahayn kuwa tuhunka uu ku jiro.
Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda QAYBTI.7.aad by cabdifitaax caano
Muqaalkan sideedad wuxuu la socdaa muqaalkii ka horeyay ee 7.aad waxan ku fahmi dooonaa waa maxay staking’ka ama in kiribto aad meel ku xirto. Staking’ku imisuu ukala baxaa Sidee bay u shaqeeyaan maxaase la isku dhax dhaafsadaa.
maxaa loo aas aasay asal ahan iyo goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhaca iyo fahamka dhabta ah een xukunka aan ku qaadan karno.
Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda QAYBTI.8.aad by cabdifitaax caano
Muqaalkan sagaalad wuxuu la socdaa muqaalkii ka horeyay ee 8.aad waxan ku fahmi dooonaa waa maxay staking’ka gaar ahan IDO.yada qababkooda kala gadisan ee staking.ka ushaqeeyo waxan ka fahmi kareyno.
maxaa loo aas aasay asal ahan iyo goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhac iyo faham dhabta ah een xukunka aan ku qaadan karno.
Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda QAYBTI.9.aad by cabdifitaax caano
Muqaalkan tobanaad wuxuu la socdaa muqaalkii ka horeyay ee 9.aad waxaana ku fahmi dooonaa waa maxay staking’ka gaar ahan IDO.yada IEO.yada iyo ICO.yada qababkooda kala gadisan ee staking.ka ushaqeeyo waxaan ka fahmi kareyno.
Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda QAYBTI.10.aad by cabdifitaax caano
Muqaalkan kow iyo tobanaad waxaana ku fahmi dooonaa sida ay u shaqeeyan suuqyada sarifka lacagaha kiribto gaar ahaan suuqyada xamuraha dhexe leh ama loo yaqaan centralized exchange iyo kuwa kale ee loo yaqaan suuqyada aan la kala lahayn ee la dhaho decentralized exchange.
maxaa loo aas aasay asal ahan iyo goobaha aan ka heli karo xogaha dhabta ah taas oo noo fudeydin karto in aan helno biyo dhaca iyo faham ka dhabta ah een xukunka aan ku qaadan karno.
mowduucan waa mowduuc Aad uqoto dheer gudaha suuqa defi’ygana ka ah udub dhaxaadka ugu wayn ee u uku taganyahay isla markaana ah Meesha labaad ee manta hantida suuqan qaybtisa ugu badan la isku dhax dhaaf sado muqalkan waxan idin kugu soo ban dhigeynaa qaabka loo baro lona ogaado matalayasha howshaas qabta ee qof walba oo muslim ah in uu ka fogaado ay tahay ama ku ogaan Kari lahayn kuwa tuhunka uu ku jiro.
Sidee lagu kala gartaa kiribtooyinka xalaashooda iyo xaaraantooda QAYBTI.11.aad by cabdifitaax caano
Muqaalkan labo iyo tobanaad waxaana ku fahmi dooonaa Waa maxay yield farming lacagtada lacag haku dhasho een ku dhax aragno suuqyada sarifka lacagaha kiribto gaar ahaan suuqyada xamuraha dhexe leh ama loo yaqaan centralized exchange iyo kuwa kal ee loo yaqaan suuqyada aan la kala lahayn ee la dhaho decentralized exchange.
Waa maxay yield farming lacagtada lacag haku dhasho QAYBTI.12.aad by cabdifitaax caano